Ogaden News Agency (ONA) – OYSU south Africa oo Ka-Qeybgalay Shir caalami ah oo lagaga hadalayey Caruurta iyo Haweenka
OYSU south Africa oo Ka-Qeybgalay Shir caalami ah oo lagaga hadalayey Caruurta iyo Haweenka
Posted by ONA Admin	/ December 13, 2012
Haya’da caalamiga ah ee Action Support Center, ayaa Shalay qabatay shirwene lagaga hadalay xaalada caruurta iyo Hawenka Qarada Africa. Shirkan ayaa waxaa ka soo qeyb galay ilaaa 10ban Haya’dood oo ka kala imaaday wadamada Africa sida, Uganda, Burundi, Kenya. Zimbabwe, Malawi, iyo Ururo-kale oo dalka South Africa ah.
Waxaa shirka lagu marti qaaday oo khudubad dheer ka soo jeediyey xubno ka soday OYSU South Africa, waxaana warbixinada soo jeediyey xoghayaha OYSU South Africa Halgame Abdinaasir Aways, halaganto Amina Maxamud, halagame Siraje Fariid.
Dhalinyaradan Ayaa soo jeediyey warbixino ay kaga xogwarameen xaalada guud ee caruurta iyo Hawenka ogadeniya waxayna goobta kusoo bandhigeen Muuqaalo naxdin lehe iyadoo shirka uu markaliya dhinaca kale isu rogay markii la arkay xaalada Ogadeniya waaxana ka biloowday goobta is dhaliilid haya’daha dhaxdooda ah.
Waxaa shirka gudoominaysay Mrs. Hunisa, oo ka socotay Human Rights SA. Hawenaydan ayaa ka shekaysay safar ay dhawaan ku tagay Itoobiya oo halkaa kula kulantay Wasiiro kamid ah waxaamadaxada Itoobiya. Waxaan ka waydiiyey ayey dhahaday xaalada Adaminimo ee ka jirta wadanka gaar ahaan saxafada, xoriyada hadalka. Waxaan moodi jiray ayey tidhi in uusan jirin wadan ka xun Zimbabwi laakiin Zimbabwi waxa loo heysto waa khalad ayey ku celcelisay, sababtoo ah Itobiya dadaka ayaa lagu qashaa ayey dhahaday. Waxaa kaloo ka hadashay gabdha ka socotay OAY African Youth. Waxayna ka hadshay xaalada Ogadeniya Gongo, DRC. Waxayna canbareyn dusha uga tuurtay madaxada Africa kuna tilmaamatay, kuwo daneystayaal ah oo dhalinyarada Africa halaagay. Waxaa ka hadlay oo kale haya’da farabadan oo ka socoday Africa, waxaana lagu balamay in wax laga qabato loona fiirsado dhibaatada ka socota Ogadeniya.
Shirka labaad ee Hayada Action Suport Center ayaa ka dhici doona magalada Adis abab ee xarunta Itoobiya. Ajandaha ugu horeeya waa xaalada Ogadeniya waxaynuna dhowri doonaa Jawabta ay ka bixiyaan madaxad Itoobiya iyo Haya’daha Itoobiya ee shirka ka soo qeyb gali doona iyo waxay kagaga jawabaan sawirada naxdinta lehee gabdhaha ogadeniya?